घरमै बसी च्याउ खेती यसरी गर्नुहोस् . | latestnepali.com
घरमै बसी च्याउ खेती यसरी गर्नुहोस् .
च्याउ खाने मानिसहरू बढेसँगै यसको व्यवसाय पनि बढिरहेको छ। खेती गर्नलाई धेरै ठुलो ठाँउ पनि नचाहिने तथा बेच्नलाई सजिलो भएकाले यसप्रतिको आकर्षण बढेको हो। के यसलाई घरमै बसेर खेती गर्न सकिएला ?
च्याउको बीउ कसरी छान्ने :
घरमा खेती गर्नको लागि सबैभन्दा सजिलो च्याउ भनेको कन्ये च्याउ नै हो।
नेपालमा विशेष गरी दुई जातका कन्ये च्याउ पाइन्छन्। ती हुन्स् प्लुरोट साजोर-काजु र प्लुरोट ओइस्ट्राटस।
आफूलाई उपयुक्त हुने बिउ छानेर लिन सकिन्छ। प्लुरोटस् साजोर- काजु जातको च्याउको खेती सामान्यतया ८००-१४०० मिटरको उचाइमा चैत्रदेखि कार्तिक महिनासम्म २०-३०० सेन्टिग्रेड तापक्रममा गर्न सकिन्छ।
८०० मिटर भन्दा कम उचाइमा हो भने कार्तिक देखि माघ महिनासम्म २०-३०० सेन्टिग्रेड तापक्रममा गर्न सकिन्छ। यो २८० सेन्टिग्रेड तापक्रम पाउँदा पूर्ण अवस्थामा फल्छ।
प्लुरोट ओइस्ट्राटस च्याउ हिउँदको मौसममा खेती गर्न राम्रो मानिन्छ। यसका लागि १५-२०० सेन्टिग्रेड तापक्रम राम्रो हुन्छ।
प्राय : जसो कन्ये च्याउ फल्ने औसत तापक्रम २३० सेन्टिग्रेड हो।
केके सामाग्रीहरू चाहिन्छ :
प्लास्टिक ब्याग, प्लास्टिक सिट, छुरीर हँसिया, चप्पर, डोरी, ड्रम, बाल्टिन, स्टोभर दाउरार चुलो, मट्टितेल, पराल, च्याउको बीउ, सिन्कार तार, अल्कोहलर स्प्रिटर डिटोल, तराजु, मुखमा लगाउने मास्क, गमबुट, स्प्रेयर ट्याङ्क, विषादी, पी.एच. पेपर र थर्मोमिटर ।
सामान्यतया १ बोतल च्याउको बीउबाट १६ इन्च चौडाइ र २४ इन्च लम्बाइको प्लाष्टिकमा ३ देखि ४ वटा च्याउको डल्ला तयार गर्न सकिन्छ। १ बोतल च्याउको बीउका लागि करिब ५ के।जी नकाटेको परालको आवश्यकता पर्दछ।
खेती कसरी गर्ने :
परालमा रहेका आँखाले देख्न नसकिने अन्य जङ्गली तथा रोगी ढुसी, जीवाणु वा किराहरू मार्नका लागि निर्मलीकरण गर्नुपर्छ। निर्मलीकरण गर्न ड्रम, जाली र ठुलो प्लाष्टिक चाहिन्छ। ड्रममा जाली भन्दा केही तलसम्म पानी राखेर पानी तर्किएको पराल जाली माथि राख्दै जानुपर्छ।
पराल ड्रमको माथिल्लो भागसम्म पुगेपछि प्लाष्टिकले ड्रमको मुख टम्म पारेर बाँध्नुपर्छ। त्यसपछि ड्रमलाई चुलोमा राखेर बाल्दै जानु पर्छ। आगो बालेको आधा घण्टा देखि डेढ घण्टापछि मुखमा बाँधेको प्लाष्टिक बाफले माथि उठ्छ। त्यसपछि प्लाष्टिकबाट बाफ फाल्न बिचमा सानो प्वाल पार्नुपर्छ।
प्रत्येक थैलोमा पराल राख्दै थिच्दै हरेक ४ इन्चमा च्याउको बीउ छरेर टम्म भर्नु पर्छ र पराललाई गोलो बनाइ बाहिरबाट घुमाइ घुमाइ थिच्नुपर्छ। यसरी यो प्रक्रिया सकिएपछि सबैभन्दा माथि पनि केही बीउ छरिदिने र प्लाष्टिकको मुख कसिने गरी बाँध्नु पर्छ। प्लाष्टिकको डल्लो जति खँदिलो भयो त्यति नै च्याउको उत्पादन राम्रो हुन्छ।
डल्ला तयार भएपछि डल्लाको चारै तीर सफा सिन्कोले बिउको रेखाभन्दा तलमाथि प्वाल पार्नुपर्दछ। यसो गर्दा हावाको सञ्चालन प्रक्रियामा सजिलो हुन्छ। यी डल्लाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दा एकअर्कामा नछुने गरी कम्तीमा एक बित्ता वा २ देखि ३ इन्च टाढा इट्टा, फलेक वा ढुङ्गामाथि राख्नुपर्छ। कोठा सानो भएमा डल्लाहरूलाई झुन्डाएर राख्न पनि सकिन्छ। यिनीहरूलाई २५ देखि ३० डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम भएको घाम नपर्ने अँध्यारो कोठामा राखेर झ्याल ढोका बन्द गर्नुपर्छ। ३र४ दिनको अन्तरमा पटक-पटक निरीक्षण गर्दै पुनस् बन्द गर्नुपर्दछ।
गर्मी महिनामा ढुसीको विकास हुन २१ दिनसम्म राख्नु पर्छ भने जाडो महिनामा २८ दिनसम्म लग्न सक्छ। डल्लाहरूमा पूर्ण रूपमा ढुसी फैलिइसकेपछि प्लाष्टिकलाई सफा ब्लेड वा कैँचीले काटेर निकालीदिनुपर्छ।
प्लाष्टिक निकालिएको ४ देखि ६ घण्टा पछि स्प्रेयरको सहायताले डल्लाको चारैतिर पर्नेगरि भिजाउनुपर्छ। यसरी दिनको दुई पटक वा आवश्यकता अनुसार पानी दिन सकिन्छ। यी डल्लाहरूलाई २० देखि ३० सेन्टिग्रेडको तापक्रम भएको हावा खेल्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ।
प्लाष्टिक खोलेको करिब एक हप्ता पछि च्याउ टिप्नका लागि तयार हुन्छ। च्याउ टिप्दा हातले च्याउको फेदमा समाएर पराल नआउने गरी घुमाएर टिप्नुपर्छ। टिप्दा एकैपल्ट डल्लाका सबै च्याउ टिप्नुपर्छ। टिपीसकेपछि डल्लाहरूलाई चारै तिर माडेर त्यहाँ भएका स-साना च्याउका झुस फ्याँक्नुपर्छ र बेस्सरी माथिबाट थिच्नुपर्छ। यसरी थिचीसकेपछि यी डल्लाहरूबाट ७ देखि १० दिनको फरकमा पुनस् च्याउ फल्दछ। यसप्रकारको एउटा डल्लाबाट ३ पटकसम्म राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ। ३ पटकसम्म च्याउ टिपीसकेपछि डल्लालाई २-३ तहमा च्यातेर थिचेर राखेमा फेरी उत्पादन लिन सकिन्छ।
च्याउ उम्रीसकेपछि बाँकी रहेका डल्लालाई गाईरभैँसीलाई खुवाएर वा सोझै कम्पोष्ट खाडलमा गाडेर मल बनाउन सकिन्छ।
हेरचाह कसरी गर्ने :
कस्तो छ यसको बजार :
सत्य हो ? अविवाहित महिला विश्वका सबैभन्दा खुसी मानिस
गायिका बिष्णु माझी र गायक मोहन खड्काको “ए तिम्रो माया” सार्वजनिक